Kalfadhiga 2aad ee Baarlamanka Galmudug oo furmay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Kalfadhiga 2aad ee Baarlamanka Galmudug oo furmay
Kalfadhiga 2aad ee Baarlamanka Galmudug oo furmay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Aqalka sare ee BF Soomaaliya, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa Jimcihii maanta magaalada Dhuusamareeb uga qayb galay munaasabada furitaanka kal-fadhiga 2-aad Baarlamaanka Galmudug.
Munaasabadda waxaa goob joog ka ahaa madaxwaynaha dowlad goboleedka Galmudug, Mudane Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Sanataro, Wasiirro, maamulka Caasimada Galmudug iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay.
Xildhibaan Axmed Maxamed Faarax (Osaama) oo ka mid ah Baarlamaanka Galmudug kana mid ahaa guddiga qabanqaabada munaasabada ayaa ugu horayn hadlay.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug, Mudane Maxamed Nuur Gacal ayaa khubad uu ka jeediyey munaasabada ku soo bandhiga qorshayaasha horyaala Baarlamaanka Labaad ee Galmudug.
Sidoo kale, Guddoomiyaha Aqalka sare ee BFS, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa khudbad dheer ka jeediyey, waxa uuna xusay inuu ku faraxsanyahay ka soo qayb galka furitaanka kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Galmudug, waxa uuna sheegay in Aqalka Sare ee Soomaaliya u soo diri doonaan guddiyo.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa munaasabada soo gabagabeeyey, waxa uuna si rasmi ah ugu dhawaaqay furitaanka kalfadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaannada Galmudug ayaa waxa ay qaateen fasax dheer, kaddib doorashooyinkii Galmudug ee lagu soo doortay madaxda sare ee maamulka, waxaana hada horyaala shaqooyin fara badan.
Kalfadhiga labaad ee Baarlamaanka Galmudug